Ecommerce zuru ụwa ọnụ: Akpaaka na nke igwe na nsụgharị ndị mmadụ maka Mpaghara | Martech Zone
Ecommerce gafere ókèala na-aga n’ihu. Ọbụna naanị afọ 4 gara aga, a Akụkọ Nielsen tụrụ aro na 57% nke ndị na-azụ ahịa zụrụ n'aka ndị na-ere ahịa na mba ofesi n’ime ọnwa isii gara aga. N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, COVID-6 zuru ụwa ọnụ nwere mmetụta dị ukwuu na mkpọsa na gburugburu ụwa.
Brick na ngwa agha azarala nke ukwuu na US na UK, yana ọdịda nke ngụkọta ahịa mkpọsa na US afọ a na-atụ anya ka ọ ga-abụ okpukpu abụọ nke nwetara na nsogbu ego afọ iri gara aga. N'otu oge ahụ, anyị ahụla nnukwu mmụba na azụmahịa e-cross-border. RetailX atụmatụ e-azụ ahịa e-commerce na EU toro site na 30% afọ a. Na US, data site na Global-e hụrụ na azụmahịa mba ofesi etolitela 42% site na Mee nke afọ a.
N'ebe ọ bụla akara ahịa gị ga-adabere na ahịa mba ụwa nwere ike ịbụ ndụ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ndị ahịa n'ụwa niile na-achọ ijide akụkụ a na-eto eto nke azụmaahịa ọhụrụ. Agbanyeghị, ijide ndị na - ere ahịa gafere oke ala ga - agafe karịa ịnye ntụgharị asụsụ saịtị ozugbo ndị ọbịa bịara na saịtị ha.
Ndị na-enye Ecommerce ga-etinye akwụkwọ ebe n'ime usoro ha. Nke a pụtara iburu n'uche ihe ndị dị ka asụsụ ala nna SEO, na-enye onyonyo dabara adaba maka ahịa mpaghara - ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa na Europe na-achọ ire n'ahịa Eshia, naanị iji onyonyo euro-centric na saịtị gị ga-ewepụ gị. nwere ike ahịa.
Nkọwapụta na-eme ka saịtị gị na-echebara nuances ọdịbendị niile nke mpaghara ị na-achọ ire.
Nke a nwere ike iyi ka ọ gaghị ekwe omume. Ọtụtụ saịtị mkpọsa nwere ọtụtụ narị peeji emelitere mgbe niile ma iji ndị nsụgharị ọkachamara ga-adị oke ọnụ. N'otu oge ahụ, ọtụtụ nwere ike were ntụgharị asụsụ igwe na ịkọwapụta ya ka ihe osise ederede na ezughi oke ịdabere na ya. Mana dịka onye ọ bụla nke na-eji sọftụwia ntụgharị igwe mara, teknụzụ na-akawanye mma oge niile. Teknụzụ nwere ike ịbụ ezigbo ngwa ọrụ bara uru maka ịkọwapụta weebụ, yana mgbe ya na ndị ezigbo mmadụ mekọrịtara, ọ nwere ike iru oke dị egwu.
Akpaka na igwe ntụgharị asụsụ
Commongha na-ezighi ezi bụ na akpaka translation bu otu ihe dika ntụgharị asụsụ igwe. Dị ka Globalisation na Localization Authority (GALA):
Nsụgharị igwe - sọftụwia akpaghị aka nke nwere ike ịtụgharị ọdịnaya dị n'ime asụsụ asịrị. Teknụzụ ntụgharị asụsụ igwe na-agụnye ndị na-enye ọrụ dịka Google Translate, Yandex Translate, Microsoft Translator, DeepL, wdg. Ma ndị ọrụ ntụgharị ntụgharị igwe a etinyere na webụsaịtị ga-abụ naanị kpuchie asụsụ ala nna ha ozugbo onye ọbịa bịara na saịtị ahụ.
Ntụgharịaka akpaaka - Ntụgharịaka akpaaka gụnyere ntụgharị asụsụ igwe mana ọ gafere. Iji ihe ntụgharị ntụgharị abụghị naanị metụtara ntụgharị asụsụ nke ọdịnaya gị kamakwa ijikwa na idezi ọdịnaya ahụ, SEO peeji ọ bụla atụgharịrị, wee mezie mbipụta ọdịnaya ahụ na akpaghị aka, enwere ike ịdị ndụ na-enweghị ịnwe mkpịsị aka gị. Maka ndị na-ere ahịa, mmepụta sitere na ngwa teknụzụ a nwere ike ịkwalite ahịa mba ụwa ma ọ dị oke ọnụ ahịa.
Ndị mmadụ na nsụgharị igwe
Otu ihe ndọghachi azụ dị ukwuu n'iji ntụgharị asụsụ igwe eme ihe na ime bụ izi ezi. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eche na ntụgharị asụsụ mmadụ zuru oke bụ naanị ụzọ a pụrụ ịdabere na ya. Ọnụ ego nke a, agbanyeghị, buru ibu ma na-egbochi ọtụtụ ndị na - ere ahịa - ịghara ịkọwa ya, ọ naghị elekọta etu a ga - esi gosipụta ọdịnaya atụgharịrị.
Ntughari igwe nwere ike ịchekwa gị oge dị ukwuu ma izi ezi dabere na mmakọ asụsụ ahọrọ yana etu esi arụ ọrụ na ntụgharị asụsụ nke ọma maka ụzọ abụọ ahụ. Mana kwuo, dị ka ntụle bọọlụ na-atụgharị asụsụ na ntụgharị asụsụ ahụ dị mma 80% nke oge ahụ, ihe niile ị ga - eme bụ ịnweta onye ntụgharị asụsụ ọkachamara iji nyochaa ma dezie nsụgharị ahụ ka ọ dị. Site na ịnweta ntụgharị igwe akụrụngwa izizi ị na - eme ka usoro ahụ dị mfe iji mee ka websaịtị gị dịrị ọtụtụ asụsụ.
Site n'echiche ego, nhọrọ a bụ nnukwu ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ n ’ị na-ego onye ntụgharị okwu ọkachamara ka ị bido ma rụọ ọrụ n’ ọtụtụ websaịtị, ụgwọ ị ga - enweta ga-abụ ihe mmụta mbara igwe. Ma ọ bụrụ na ị mmalite site na nkpuchi mbu nke ntụgharị asụsụ nke igwe wee webata ndị ntụgharị mmadụ iji mee mgbanwe ebe ọ dị mkpa (ma ọ bụ ma eleghị anya ndị otu gị na-asụ ọtụtụ asụsụ) ma ọrụ ha yana ụgwọ ha niile ga-ebelata.
Nkọwapụta weebụsaịtị nwere ike ịdị ka ọrụ na-emenye ụjọ, mana ejiri njikwa teknụzụ na ikike ndị mmadụ mee ya n'ụzọ ziri ezi ọ bụghị nnukwu ọrụ dịka ịchọrọ. Ecommerce gafere ókèala kwesịrị ịbụ atụmatụ maka ndị ahịa na-aga n'ihu. Nielsen na-akọ na 70% nke ndị na-ere ahịa nke gbabala n'ime ahia e-commerce gafere uru na mbọ ha. Ihe ọ bụla ịbanye na mpaghara kwesịrị ịba uru ma ọ bụrụ na ejiri teknụzụ rụọ ọrụ nke ọma yana oke nke teknụzụ n'uche.
Tags: akpaka translationDeepLazụmahịa zuru ụwa ọnụecommerce zuru ụwa ọnụntụgharị asụsụebeakụkụntụgharị asụsụ igwentuziaka asụsụ ntuziaka
KosmoTime: Mepụta Ọrụ Ndị Na-edebe Oge Na Kalịnda Gị